ငယ်ဆူး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ငယ်ဆူး
Category Archives: ငယ်ဆူး
01 ။ ပန်းနု – ဇော်ပိုင် 02 ။ ချစ်သတိပြု – ဖြိုးကြီး 03 ။ မနှင်းဆီ – ဘိုဖြူ 04 ။ တစ်ကိုယ်တော် သုံးရာသီ – အာဇာနည် 05 ။ ဟာသ – ငယ်ဆူး၊ကျော်သူစိုး 06 ။ အသဲကွဲလူမိုက် – ဂျွန်ဟမ်း 07 ။ ကြယ်ကြွေညတိုင်းဆုတောင်းမယ် – အယ်နောင်း 08 ။ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု 09 ။ ချစ်သတ္တိ – ဂရေဟန် 10 ။ နီနီညိုညိုကိုကို – အဖွဲ့
July 25, 2010 Yee Wai Aung ဖြိုးကြီး ဘိုဖြူ အယ်နောင်း ဂျွှန်ဟမ်း ငယ်ဆူး ဇော်ပိုင် ကျော်သူစိုး Rဇာနည်3Comments
OKRA – မိမိကိုယ်ကိုမွမ်းမံခြင်း
၀၁. အမှိုက်တွေ ၀၂. အဝေးဆုံးသို့ ၀၃. အလိုအပ်ဆုံး မေ ၀၄. အံမဝင်ဘူး ၀၅. ဘယ်သူမှားသွားလဲ ၀၆. ချိန်ပါ ၀၇. မချစ်ရဲတော့ဘူး ၀၈. မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များသို့ ၀၉. မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များ ၁၀. မိမိကိုယ်ကိုမွမ်းမံခြင်း ၁၁. မင်းအတွက် ၁၂. မင်းရှိတဲ့အချိန် ၁၃. ဆုံးဖြတ်မရ Download Link : 4shared
June 25, 2009 cmmaung အဆိုတော် (အဖွဲ့) ငယ်ဆူး Myanmar Artist Alternative OKRA4Comments
၁။ တိမ်တွေလို ၂။ အမုန်းများစွာအတွက် ၃။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ၄။ မုန်းစရာကြီး ၅။ အကျပ်ရိုက်ခြင်း ၆။ ၀မ်းနည်းပါတယ် ၇။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့လမ်းများ ၈။ စာရင်းတွေရှင်းခဲ့ ၉။ အကုန်ယူသွားပါ ၁၀။ မင်းရှိတဲ့အချိန် ၁၁။ တိမ်တွေလို
June 8, 2008 mmsong 9mm အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ငယ်ဆူး အောင်ကောင်းထက် ရေဗက္က၀င်း မြေပဲယို ချောစုခင် မိုးမိုး Leaveacomment
ငယ်ဆူး – အပြင်းဖျားသွားလိမ့်မယ်
၁။ အားလုံးတန်းစီ ၂။ မင်းမသိတဲ့ ကိုယ့်မျက်ရည် ၃။ နှလုံးရောဂါ ၄။ အ လို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ၅။ ဒီကောင်မလေးကို ၆။ အမှိုက်တွေ ၇။ အပြင်းဖျားသွားလိမ့်မယ် ၈။ သူမ၏သက်ရောက်မှု ၉။ ဒီလိုပါ ၁၀။ စာမလာ သတင်းမကြား ၁၁။ ချိန်ပါ ၁၂။ မ မရှိတဲ့နေ့ရက်များ
May 28, 2008 MusicLover အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ငယ်ဆူး Leaveacomment